3d Cury nsu, 358 Security nsu, Chain Link ngere - Yeson
3D Cury ngere
Aluworo Iron ngere
358 Security ngere
nwa oge ngere
Otuowo Control ngere
Anping Yeson odude ke ọwọrọetop waya ntupu Town of China- Anping. Anyị na-e etinye obi gị dum na elu àgwà waya ntupu mmepụta site ná mmalite. Na ngwa ngwa mmepe, anyị na-aghọ ihe ndị ọzọ siri ike, na anyị na-guzobere ọtụtụ alaka dị iche iche na ngwaahịa. Anyị na ngwaahịa na-agụnye: welded waya ntupu, welded ntupu panel, nwee ume welded ntupu panel, gbasaa ntupu, square waya ntupu, hexagonal waya ntupu, gabion ntupu, yinye njikọ nsu, aluminum waya netting, igwe anaghị agba nchara waya ntupu, ígwè waya, waya nwere ogwu, na aguba waya etc .. Anyị na ngwaahịa na e exported ka USA, Italy, Russia, Australia, Mid-East, Africa, na South East Asia.
Tọrọ ntọala na 1990
ihe karịrị 10 mmepụta edoghi
Ihe karịrị 100 nde
20 + ngwaahịa, One-nkwụsị shopping
ịkwanyere yinye njikọ ngere
yinye njikọ fencing nwa
yinye njikọ ngere kpaliri
yinye njikọ ngere
V ntupu ngere
ịgbado ọkụ nwa oge ngere
Chain njikọ Nwa Oge ngere
© Copyright - 2010-2022 : All Rights Reserved. Hot Products - Sitemap - IGBOB Mobile
Chain Link Nwa Oge ngere , Steel Palisade ngere, 868 Ugboro abụọ ngere ngere , 358 Security ngere, N'èzí Nwa Oge ngere , Palisade ngere,